मौसम डीपीएलको - खेलकुद - साप्ताहिक
विश्व क्रिकेटलाई आधुनिक समयअनुसार जीवन्त राख्न कसैले सहयोग गरेको छ भने त्यो हो— ट्वान्टी–२० क्रिकेट, अनि कसैले विश्व क्रिकेटलाई अत्यधिक व्यवसायिक बनाएको छ भने त्यो पनि ट्वान्टी–२० क्रिकेट नै हो । इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) ले विश्व क्रिकेटलाई व्यवसायिक रूपमा कहाँ पुर्‍याएको छ, प्रस्ट छ । आईपीएलकै सिको गर्दै अस्ट्ेरलियामा बिग ब्यास तथा वेस्ट इन्डिजमा क्यारेबियन लिग पनि चलिरहेका छन् ।
के यस्तै स्थिति नेपाली क्रिकेटमा धनगढी क्रिकेट लिग (डीपीएल) ले ल्याउनेछ ? नेपाली क्रिकेटको सर्वाधिक ठूलो कमजोरी घरेलु क्रिकेट ढाँचाको अभाव नै हो । शून्यकै स्थितिमा छ, नेपाली घरेलु लिग । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) को विवादका कारण प्रतियोगिता नै हुन छाडेका छन् । यस्तोमा निजी क्षेत्रबाट केही राम्रा प्रतियोगिता नभएका होइनन् । जस्तो केही समयअघि काठमाडौंमा एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएएल) सम्पन्न भएको थियो ।
यी सबैबीच डीपीएल फरक हुनेछ, किनभने यो क्रिकेटको सहरका रूपमा आफ्नो परिचय बनाउन लागिपरेको धनगढीमा हुनेछ । त्यसका लागि खेलाडीहरूको अक्सनसमेत गरिएको थियो, अरू विदेशी प्रतियोगितालाई पछ्याउँदै यसको आयोजना त्यस्ता व्यक्ति अथवा समूहले गरिरहेको छ, जसले आफूलाई राम्रो आयोजक त सावित गरेको छ नै, त्यसमाथि यो समूहको स्वार्थ नेपाली क्रिकेटको विकासमा मात्र देखिएको छ र ती हुन्— सुभाष शाही र उनका साथीहरू ।
त्यसैले त यो प्रतियोगितासँग धेरै व्यवसायिक समूह पनि जोडिएका छन् । यो प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक सगरमाथा सिमेन्ट हो । यो प्रतियोगितामा गोल्डस्टार जुत्ता पनि जोडिएको छ । प्रतियोगिताको बजेट १ करोड ६० लाख रुपैयाँभन्दा बढी छ । यो प्रतियोगिताका विजेताले २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन् भने उपविजेताले ७ लाख रुपैयाँ अनि म्यान अफ द म्याचले १० हजार रुपैयाँ । म्यान अफ द सिरिजले मोटरसाइकल प्राप्त गर्नेछन् । प्रतियोगिता सुरु हँुदैछ चैत २७ गतेदेखि । यो प्रतियोगितामा ६ वटा फ्रेन्चाइज टिमले सहभागिता जनाउनेछन् ।
डीपीएलको घरेलु टिम हो सीवाईसी अत्तरिया । अत्तरिया कैलाली जिल्लाकै एउटा सानो सहर हो । यो टिमले सिर्जनशील युवा क्लबको छातामुनि रहेर खेल्नेछ । यसका मालिक हुन्— स्थानीय व्यापारी नरबहादुर राई । अत्तरियामा सामाजिक सेवामा निरन्तर काम गरिरहेको सिर्जनशील युवा क्लब अब विस्तृत रूपमा क्रिकेटमा पनि लागेको छ । भनिरहनु पर्दैन, यसै कारण टिमका समर्थक धेरै हुनेछन् र उनीहरूको उपस्थिति प्रतियोगिताका क्रममा महत्त्वपूर्ण रहनेछ । खेलाडी अक्सनमा अत्तरियाले ७ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्चिएको थियो । टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल हुन् । मल्लकै नेतृत्वमा नेपालले हालै मात्र आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिग तथा इमिर्जिङ टिम्स कप खेलेको थियो । अत्तरियाका प्रमुख खेलाडी हुनेछन्— महबुब आलम, करण केसी, प्रदीप ऐरी तथा सन्दीप सुनार । टिममा युवा खेलाडीहरूको बाहुल्यता छ ।
यो आयोजक सहर धनगढीको आफ्नै टिम हो । यस अर्थमा घरेलु टिम । यो टिमका कप्तान कप्तान हुन्— राष्ट्रिय टिमको नेतृत्व सम्हालिरहेका पारस खड्का । पारसले पेटको शल्यक्रियापछि आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट लिगमा केन्याविरुद्ध खेलेनन् । उनले त्यही कारणले इमर्जिङ टिम्स कप पनि खेलेनन् । पारसले भनिसकेका छन्, डीपीएलसँगै उनको पुनरागमन हुनेछ । यसले टिममा रौनक थप्ने निश्चित छ । धनगढीका स्थानीय क्रिकेट समर्थकमाझ पारस निकै लोकप्रिय छन् । खेलाडी अक्सनमा टिम चौराहाले ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । टिमका अन्य प्रमुख खेलाडीमा पृथु बास्कोटा, मोहम्मद आरिफ सेख, अनिल मण्डल, राजु रिजाल, प्रेम तामाङ, सुसन भारी आदि छन् । टिम चौराहाका मालिक राजकुमार श्रेष्ठ स्थानीय व्यापारी हुन् ।
प्रतियोगितामा सर्वाधिक बलियो टिमका रूपमा शरद भेषवाकरको नेतृत्वमा रहेको विराटनगर किङसलाई मानिएको छ । टिमका मालिक पूर्वखेलाडी पारस लुनिया हुन् । पारसले विराटनगर किङ्सका लागि महालक्ष्मी केवलको प्रतिनिधित्व गर्छन् । खेलाडी अक्सनमा विराटनगरले ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरे पनि राम्रा खेलाडीहरू अनुबन्ध गरेको छ । यसका प्रमुख खेलाडीमा दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, जितेन्द्र मुखिया तथा प्रनित थापा छन् । यो टिम पनि धेरै हदसम्म कप्तान शरदकै प्रदर्शनमा भर पर्नेछ । शरदको नेृतत्वमा पछिल्ला केही घरेलु प्रतियोगितामा सफलता हात पारेको पृष्ठभूमिमा शरदबाट राम्रो प्रदर्शनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
कञ्चनपुर आइकोनिकलाई प्रतियोगिताको तेस्रो स्थानीय टिम भन्न सकिन्छ । यसका मालिक हुन्— स्थानीय व्यापारी पीताम्बर जोशी तथा टिम कप्तान विनोद भण्डारी । विनोद कञ्चनपुरकै खेलाडी हुन् । आफ्नो घरेलु मैदानमा उनी प्राय: लयमा देखिन्छन्, त्यसैले पनि धेरै अर्थमा टिम उनकै काँधमा टिकेको हुनेछ । खेलाडी अक्सनमा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने टिममा परेको थियो— कञ्चनपुर आइकोनिक । यसले ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । टिमका अरू प्रमुख खेलाडीमा सागर पुन, अविनाश कर्ण, सुनिल धमला, सिद्धान्त लोहनी, ललितसिंह भण्डारी तथा चन्द्र साउद छन् ।
काठमाडौं गोल्डेन्सले प्रतियोगितामा काठमाडौंको प्रतिनिधित्व गर्नेछ । यो अवसर जुटाएको छ— गोल्डेनगेट कलेजले । नेपाली क्रिकेट र गोल्डेनगेट कलेजबीच लामो सम्बन्ध छ र यो टिमका मालिक हुन्— कलेजका सीईओ रमेश सिलवाल । रमेश आफैं नेपाली क्रिकेटमा सक्रिय व्यक्तित्व हुन् । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले गठन गरेको नेपाल क्रिकेट संघको नेतत्व पनि उनैले पाएका थिए । टिमका कप्तान वसन्त रेग्मी छन् । वसन्त त्यस्ता खेलाडी हुन्, जसले टिम संकटमा पर्दा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्छन् । त्यसैले पनि यो टिम पनि धेरै अर्थमा कप्तानकै प्रदर्शन वरिपरि घुम्नेछ । यो टिमले खेलाडी अक्सनमा ७ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । टिमले सोमपाल कामीका लागि सर्वाधिक लगानी गरेको छ । वसन्त र सोमापालसँगै टिममा नरेश बुढाऐर, भुवन कार्की, सन्तोष भट्टराई तथा रोहित पौडेल पनि छन् ।
रूपन्देही र शक्ति गौचन सम्भवत: कहिल्यै छुट्टिन सक्नेछैनन् । रूपन्देही च्यालेन्जर्सको नेतृत्वमा यिनै अनुभवी खेलाडीबाहेक अरू को हुन सक्छन् ? शक्तिले रूपन्देहीको क्रिकेट विकासमा पनि ठूलै योगदान दिएका छन् । टिममा अर्को मीठो संयोग के छ भने यसले सकेसम्म स्थानीय खेलाडीलाई नै महत्त्व दिएको छ । रूपन्देही च्यालेन्जर्सले खेलाडी अक्सनमा ७ लाख २० हजार रुपैयाँ खर्चिएको थियो र त्यस क्रममा उसले सुवास खकुरेल, राजेश पुलामी जस्ता खेलाडी किनेको थियो । टिमका अरू प्रमुख खेलाडीमा प्रकाश केसी, शंकर राणा पनि छन् । यो टिम पनि धेरै हदसम्म आफ्नो कप्तानको प्रदर्शनमा भर पर्नेछ । शक्तिले रूपन्देहीको टिमलाई यसअघि धनगढीमा सफल सावित गरिसकेका छन् । शक्तिको विगतको अनुभव यसपल्ट पनि काम लाग्नेछ । सुरज उप्रेती टिमका मालिक हुन् । यो टिम एसआर ग्रुप्सको स्वामित्वमा छ ।
गर्मी र खानपान